लोक सेवाको परीक्षा दिन नरोक !
सम्पादकीय लोक सेवाको परीक्षा दिन नरोक ! कुनै योग्य व्यक्ति संक्रमणकै कारण परीक्षामा सम्मिलित हुनबाट वञ्चित नहोऊन्
संक्रमित भएकै नाममा कुनै अवसर र अधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय त हुँदै हो अमानवीय पनि हो । लोक सेवा आयोगले लिन लागेको परीक्षामा कोभिड—१९ संक्रमितहरू सहभागी हुन नदिने प्रावधान परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो प्रावधानका कारण कोभिड–१९ संक्रमित र संक्रमितसँग संसर्ग भएका व्यक्तिहरूले आयोगले लिने परीक्षा दिन नपाउने भएका छन् । केही महिनादेखि बन्द रहेको लोक सेवाका परीक्षाहरू यही महिनाबाट सुरु हुने बताइएको छ । लोक सेवा आयागले राष्ट्रका लागि आवश्यक जनशक्ति छनोट र नियक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्छ । अहिलेसम्म लोक सेवा आयोग अपेक्षाकृत कम विवादमा परेको छ ।
नेपाली समाजमा अझै पनि सरकारी जागिरको आकर्षण बढी नै छ । यसैले बहुसंख्यक शिक्षित व्यक्तिहरूले लोक सेवाले लिने परीक्षाको तयारी गर्छन् । विशेषगरी निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने मूल ढोका नै लोकसेवा आयोग लिने परीक्षा भएकाले धेरैले लामो समय लगाएर तयारी गरेका हुन्छन् । अर्थात्, लोक सेवाका परीक्षाहरूमा व्यक्तिको आकांक्षामात्र होइन भावनासमेत जोडिएको हुन्छ । सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद तोकिएकाले पनि लोक सेवाका परीक्षाहरू आकांक्षीहरूको जीवनमा बढी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । दुर्भाग्य, कोभिड—१९ संक्रमित र संक्रमितको संसर्गमा रहेकाहरूलाई परीक्षा दिन रोक्ने प्रावधान लागू गरेर लोक सेवा आयोगले मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको देखियो । संक्रमण निज व्यक्तिको रहर वा चाहनाबाट भएको पक्कै होइन । राज्यले संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकेको व्यक्ति संक्रमित हुने थिएन । कसैलाई निजले नगरेको कसुरमा सजाय दिनु प्राकृतिक न्यायको विरुद्ध हुन्छ ।
महामारीले भयावहरूप लिन लागेका बेला संक्रमण फैलने जोखिम बढाउनु गैरजिम्मेवार हुन्छ । यस्तै, लामो समयसम्म लोक सेवाका परीक्षाहरू रोक्न पनि मिल्दैन । यसैले लोक सेवा आयोगले संक्रमण नफैलने गरी आफूले लिने परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न खोज्नु स्वाभाविकमात्र आवश्यक र उचित पनि हो । तर, यस क्रममा उमेरका कारण अर्को मौका नपाइने हुनाले पनि संक्रमित वा तिनको संसर्गमा आएका व्यक्तिले परीक्षा दिन नपाउने गरी बन्देज लगाइनु न्यायोचित हुँदैन । यस प्रावधानबाट सम्बन्धित व्यक्तिको भविष्य त अन्धकार बनाउनेछ नै राष्ट्र पनि योग्य व्यक्तिको सेवा पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनसक्छ । अझ गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषय त व्यक्तिको समान अवसर पाउने संवैधानिक अधिकार हनन हुनु हो । यसैले संक्रमण रोक्ने विशेष उपाय अपनाएर पनि परीक्षामा सबै परीक्षार्थी सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था लोक सेवा आयोगले गर्नुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि निर्णय गर्नुपर्छ । परीक्षामा सम्मिलित हुनबाट कुनै योग्य व्यक्ति संक्रमणकै कारण वञ्चित नहोऊन् !